टिकाथली भूत आतंकबारे डरलाग्दो खुलासा, रबिलाईनै सिध्याउने योजना,यसरी भयो असफल(भिडियो सहित) – पुरा पढ्नुहोस्……
पोखरा- यतिबेला सामजिक संजाल र नेपाली अनलाइन मिडियामा एक घटनाले राम्रो गरि ठाउँ पाएको छ.नपाउस पनि कसरी घर भित्र भुत,एकाइसै साताबदिमा?? घरमा अदृशय शक्तिले सताएको भन्दै आफुहरुलाई उद्धार गरिदिनु भन्दै टिकाथलीकी एक महिलाले नेपालको टेलिभिजन इतिहासमा सबै भन्दा चर्चित बनेको कार्यकममा सिधा कुरा जनतासंगमा बिन्ती विसाइन.
हेर्नुहोस भिडियो रिपोर्ट.टिकाथली भूत आतंकबारे डरलाग्दो खुलासा.हेर्नुहोस यिनीहरुनै हुन् घरमा भुतको नाटक गर्नेहरु. घरमै बोलाएर रबिलाईनै सिध्याउने योजना,यसरी भयो असफल। स्रोतःओएसनेपाल
Prevरबिलाइ नेपाली होइन भन्नेलाइ कांग्रेस प्रवक्ताको कडा जबाफ भिडियो सहित
Nextरिलिज भएको १ साता नबित्दै युट्युबमा सार्वजनिक भयो ‘पटुकी’ हेर्नुहोस …. पुरा फिल्म हेर्नुहोस
रबिलाइ भगवान मान्नेहरु कान खोलेर सुन एकपल्ट सबैले हेर्नै पर्ने (भिडियो सहित)